5 Best Obodo ato uto Iji Gbalịa Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Obodo ato uto Iji Gbalịa Na Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/01/2021)
Obodo ato uto abịa na ọtụtụ iche nile Europe. Mba ọ bụla na mpaghara nwere ya obere na-emeso ha bụ ndị mpako na-enye. Maka njem nleta na a ụtọ eze, ọ dịghị ihe ọzọ alluring banyere njem karịa ọhụrụ ndị na-amasị. Ebe a na-anyị n'elu 5 kacha mma obodo ato uto na-agbalị na Europe.
1. A Obodo Sweet – Mozartkugel, Salzburg, Austria
Otu n'ime kasị ewu ewu na ama obodo ato uto na Europe bụ Mozartkugel. Dị ka anyị maara, Paul Furst kere mbụ uzommeputa na Salzburg karịrị otu narị afọ gara aga. Ọ bụ a layered chocolate na-emeso na green pistachio na Nougat.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe mere ego nsụgharị, na i nwere ike ịhụ ha na Ahịa. Otú ọ dị, mbụ version bụghị oke ọnụ, na ọ bụ uru dị iche na price. n'ozuzu, ha bụ otu onye nke kasị mma obodo ato uto na-eme n'ụlọ gị Austrian njem.
Salzburg ka Passau
2. A Obodo Sweet – donuts, Berlin, Germany
Ị na-enweghị ka tie gị ire na a eriri na-ekwu na aha a obodo ụtọ. People ebelata ha Berliner n'èzí Berlin, na pancakes na Berlin. N'adịghị ka American donuts, ha enweghị onu ke center. Mgbe ị na-eso ọdịnala Ntụziaka, ị ga-esi a na-atọ ụtọ obi ụtọ nke uto, jupụta na jam ma ọ bụ marmalade, na sugar icing.
3. stroopwafel, Amsterdam, Mba netherland
stroopwafel bụ otu n'ime ndị kasị na-eri ahụ obodo ato uto otu nwere ike ịhụ na Europe. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ato uto, e nweghị arụmụka na onye malitere Ntụziaka na ebe. Na-eme achịcha na Dutch obodo nke Gouda mere ha mbụ. N'ihi na ha abịa na njem nke ọma, ha na-eme magburu onwe ncheta.
Abụọ mkpa wafers ada ọnụ na a caramel "mama" ka otu Stroopwafel. Ọ bụ ezie na ọ na-adịghị ada pụrụ iche, na eluigwe na ala mkpesa na-eme ka ha otu nke kasị mma obodo ato uto. Ndị a na ato uto ka a nri zuru okè mgbe ogologo ụbọchị nke ụgbọ okporo-hopping, shopping, na-agba ígwè dodging - niile ahụkarị Amsterdam eme.
4. Danish achịcha dị iche iche, Copenhagen, Denmark
Ọ bụ ezie na Denmark bụ obere, na akụkọ na-emeghị nke ya kasị mma obodo ato uto njem n'ebe nile. Danish achịcha dị iche iche gaa Denmark na a ìgwè nke Austrian-eme achịcha. N'ezie, ha gbanwetụrụ na Ntụziaka karịrị afọ, na ọtụtụ Scandinavian kwabatara wetara America. Otú ọ dị, ị ga-enwe na ya kasị dị ná mba ebe raara onwe ya nye na-eme achịcha ha zuo ya.
Nke a obodo Danish ụtọ bụ otu n'ime lightest ihe ị ga-atọ. Na-eme achịcha elu ya anya na jam, cheese, ma ọ bụ ude inye ahụ zuru okè Scandinavian flair. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọgaranya flavor na calories, mgbe a ụbọchị nke ịgagharị Copenhagen na snow, unu ga-enwe ma ndị a àgwà.
Cuberdon bụ otu nke kasị mma na nke kasị aghọta obodo ato uto na Europe. Ọ bụ okpu-ekara, mgbe odo odo na jupụtara na utu ndochi. Mgbe ị na-aru n'ime otu, ezé gị mikpuo soft n'etiti ejuputa na ala. Ha na-akpọ ya Belgium best-na-ezo ezo. N'ihi na ọ bụ ike iji chebe ya mgbe a izu ole na ole, ha Don bụghị mbupụ ya mgbe. Otú ọ dị, maka a njem nleta onye chọrọ ka na-agbalị ihe pụrụ iche na-eme ya n'ụlọ, na cuberdon zuru okè.
Ị chọrọ itinye sugar na ose n'ime ndụ gị ma na-a ụgbọ okporo ígwè nri tour site Europe? AKWỤKWỌ gị tiketi Today!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Obodo ato uto Iji Gbalịa Na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Denmark #sweets chocolate eurotrip travelaustria njegharị travelgermany nje ndi njem